(Kugcine ukubuyekezwa On: 19/02/2021)
Kulula ukuzizwa ukhathele futhi evilaphayo phakathi nohambo olude isitimela. Ngemva ehlezi isitimela amahora, kubalulekile yokwelula izinyawo zakho uma kungenzeka. Ukuhamba omcane enkantini kuyokusiza ukuba usebenzise isikhathi futhi bazizwe agcwalisiwe. Hamba ngezinqola uye ku- enkantini, ukubheka landscape futhi ujabulele ezinye dessert nge isiphuzo ozikhethele
Ukuhamba ngesitimela kungaba ukuxhumana kwabantu. Ukuhlangana nabantu abasha ezitimeleni kulula ukudlula ezinye izindlela ezokuthutha. Ngokungafani indiza, une inkululeko ukuhambahamba futhi bahlanganyele nabanye abavakashi. Kuyajabulisa lokho ongakufunda kwabanye abantu nezindaba zabo – ukukhuluma ngokuphila, umsebenzi, futhi ukhulise inethiwekhi yakho. Ask the person next to you about the book they’re reading, banikeze uswidi, noma umane uqale ingxoxo mayelana ne- uya khona babelana uvakasha. It Kudlula izingxoxo une ngenkathi ukuhamba-Europe ngesitimela ukuthi kudala izinkumbulo ehlala njalo.
I eside isitimela kulolu hambo ngezinye izikhathi kuphela nezikhathi ezolile ngesikhathi sakho uhambo. Kungaba ithuba kumnandi ngawe ifake uphethiloli futhi ulungiselela ofuna ukuya kuyo oyikhethile. Isiphuzo amanzi amaningi, udle ukudla, futhi uma kungenzeka, ubuthongo. Ukusebenzisa uhambo lwakho eside isitimela ngokuhlakanipha kuzokusiza bazizwe beqabulekile futhi akukhuthalele - isilungele uya khona eduze.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthings-long-train-journeys%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)